jeudi, 07 janvier 2021 10:01
Fifidianana Loholona : Anio ny vokatra ofisialy
Hotanterahina anio etsy Ambohidahy ny lanonana ara-pitsarana hanambaran’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny voka-pifidianana ofisialy ny fifidianana Loholona notanterahina ny 11 desambra 2021. 12 amin’ny 18 ireo Loholona nofidiana mivantana. Ny filoham-pirenena no manendry ny 6, izay mandrafitra ny iray ampahatelon’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierandoholona amin’ny endriny vaovao. 12 465 ireo mpifidy vaventy voasoratra tao anaty lisi-pifidianana. 11 642 no nandray anjara tamin’ny fifidianana araka ny tatitra vonjimaika nataon’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na CENI ny alarobia 23 desambra 2020. Tao amin’ny Distrikan’i Miandrivazo sy i Morombe no voalaza fa nisy fandikan-dalàna tamin’ny fifidianana, ka nisarihan’ny CENI ny sain’ny Fitsarana mahefa. Manana 15 andro aorian’ny famoahan’ny HCC ny vokatra ofisialy ny filoham-pirenena hanendrena ireo senatera 6.
Nanao hetsika fitakiana, sady nilanja sorabaventy ny mpianatry ny ENS (École Normale Supérieure) Ampefiloha Antananarivo androany maraina. Nivoaka ny faritry sekoly izy ireo, nandoro kodiarana teo amin'ny arabe niteraka fanelingelenana ny fifamoivoizana tamin'ny faritra iny. Ny fandraisana ho mpampianatra ireo vita fiofanana ao no votoatin'ny fitakiana. Efa maro anefa ny fifampiraharahana nifanaovan'ireto mpianatra ireto tamin'ny fitondram-panjakana fa tsy nisy vokanyMisy ireo mpianatra efa firy taona nahavita fianarana tsy voray nefa misy, hoy ireto mpianatra manao fitakiana ireto, ny fehezan-dalàna mamaritra fa tokony ampidirina miasa avy hatrany izay vita fiofanana, nefa hatreto tsy misy tanteraka izany.
Madagascar est habitué à démarrer une nouvelle année avec un gros scandale ces derniers temps. Le début de 2020 était marqué par les controverses générées par l’histoire de paniers garnis dont l’issue était le remplacement de la ministre de l’Education nationale de l’époque. L’affaire était ainsi étouffée sans pour autant que la suite ait donné lieu à un dénouement heureux.La Covid-19 a complexifié encore davantage plus la situation quand l’épisode de « bonbons », ayant mis en jeu des milliards d’ariary, a éclaté.L’on en savait tous l’aboutissement. La nouvelle année 2021 a débuté, elle aussi, avec un scandale d’envergure internationale appelé « trafic d’or » s’élevant à plus de 16 milliards d’ariary.
mardi, 05 janvier 2021 19:10
Ministeran'ny fampianarana ambony : Tsy mbola nisy tolotrasa anoloana ny mpiasa FUM ao Paris
Nanao fanambaràna ny ministeran'ny fampianarana ambony fa eo ambany fiadidiany tokoa ny Foyers Universitaires Malgaches na FUM ao Arago sy Cachan any Frantsa, ary ao anatin'ny velirano faha telon'ny filoham-pirenena ny fanavaozana sy fanatsarana ny rafipitantanana, ka anisan'izany ny fanavaozana ireo mpiasa any an-toerena. Manamafy kosa anefa ity fanambaràna nosoniavin'ny Sekretera jeneralin'ny ministera ity, fa tsy nifandray tamin'ny fikambanana "Tous Ensemble pour Madagascar" na TEM any Frantsa, ary tsy mbola nametraka tolotrasa teo anivon'ny ministera ny TEM, ny ministera rahateo nilaza fa tsy mbola nisy tolotrasa mahakasika izany nataony. Marihin'ity fanambaràna ity fa ny TEM dia fikambanana toa ny fikambanana rehetra, ary tsy manana rohy manokana amin'ny ministera. Manamafy ny ministera fa tsy maintsy manaraka ny fepetra voarakitry ny lalàna ny fampidirana sy fanoloana ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony.
lundi, 04 janvier 2021 19:56
Fifidianana Loholona : Amin'ny alakamisy izao ny vokatra ofisialy
Hotanterahina etsy amin'ny efitrano malalaky ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana ny alakamisy 07 Janoary 2021 amin'ny 10 ora maraina ny lanonana ara-pitsarana hanaovana ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana Loholona. Miisa 12, ka 2 isaky ny Faritany, ireo Loholona nofidiana ny 11 desambra 2020 ka nandraisan'ireo mpifidy vaventy niisa 12 465 anjara.
mercredi, 30 décembre 2020 20:07
30 desambra : 45 taona lasa izay ny Repoblika faharoa
Teraka ny 30 desambra 1975, ny Repoblika faharoa teto Madagasikara, taorian’ny fitsapankevi-bahoaka niaraka tamin’ny Satan’ny Revolisionina Sosialista Malagasy sy ny Lalampanorenana. Didier Ratsiraka no nitondra ny firenena teo.
50 ireo mpanao gazety lavo amperin’asa, nanerantany, teo anelanelan’ny 1 jaonary ka hatramin’ny 15 desambra 2020, araka ny tatitra nataon’ny Reporters sans frontières (RSF), tamin’ny tatitra nataon’ity fikambanana iraisam-pirenena ity ny 29 desambra teo, ho an’ny taom-piasana 2020. Ny 34 tamin’ireo dia nisy namono tany amin’ireo firenena heverina fa mandry fahalemana. Marihina fa 53 ny mpanao gazety no namoy ny ainy manerantany nandritra ny taona 2019.
dimanche, 27 décembre 2020 11:42
MFM : 48 taona nijoroana
27 desambra 1972 - 27 desambra 2020, feno 48 taona katroka amin'ity anio ity ny antoko MFM. Banga ny toeran'ny filoha nasionalin'ny antoko taorian'ny nahafatesan'i Manandafy Rakotonirina ny 25 Marsa 2019. Ity farany izay niara-nanorina ny MFM niaraka tamin'i Germain Rakotonirainy na Lynx.
samedi, 26 décembre 2020 18:36
Ankilibory - Ampanihy Andrefana : Nisitraka fanampiana avy amin’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny mponina
Tonga ary nozaraina tamin’ireo mpiray tanindrazana ianjadian’ny tsy fanjariantsakafo ao Ankilibory, Distrika Ampanihy Andrefana ireo fanampiana avy amin’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, sy ireo fanomezana azony tamin'ny 12 desambra, nankalazana ny nitsengerenan'ny taona nahaterahany. Mifanojo indrindra amin’ny fankalazana ny Krismasy 2020, ny tolotanana. « Fanehoana ny firainsankina ho an'ireo havantsika hianjadin'ny Kere no zava-dehibe indrindra satria dia ny vahaolana maharitra no tokony hisy mba tsy hiverimberina intsony izao toe-javatra mampalahelo loatra ho an'ny mpiray Tanindrazana izao », hoy i Marc Ravalomanana.
jeudi, 24 décembre 2020 18:58
Hery Rajaonarimampianina : « Raiso ny andraikitra manandrify anao !»
Nitafa tamin’ny vahoaka Malagasy tamin’ny alalan’ny horanantsary fohy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, avy any Frantsa, nirary soa sy nampahery ny Malagasy mba tsy ho kivy amin’izao ankatoky ny krismasy sy ny fitsenana ny taona vaovao izao. Sivy volana aty aorian’ny nitafany farany ny Marsa 2020 no nilazany fa fotoana handinihan-tena izao. Mila toe-tsain’ny fisandratana, fiovana ary fanovana. Koa raiso ny andraikitra manandrify anao, hoy izy !